သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အလွယ်ကူဆုံး Blog Chat! | Martech Zone
သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အလွယ်ကူဆုံး Blog Chat!
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 15, 2007 စနေနေ့, မတ်လ 17, 2007 Douglas Karr
ဒီဟာကတော်တော်လေးပျော့ပျောင်းနေတယ် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ“ ချက်” ဆိုသော link အသစ်တစ်ခုကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဒီဟာကသုံးပြီးစကားပြောတာ Gabbly.com.
သင်၏ဒိုမိန်းအမည်ကို URL တွင်လိပ်စာလုပ်ပါ။ http://gabbly.com/dknewmedia.com
မင်းပြီးပြီ ဒါပဲ! မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ ကုဒ်မရှိ၊ ပလပ်ဂင်များ၊ ဝစ်ဂျက်များမရှိ။ ပြီးပြီ။
သင်၏ဘ ၀ သည်ထိုအရာအပေါ်မှီခိုပါကသင်၏ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ကိုရေးပါ။
Google Earth ဖြင့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
မတ်လ 16, 2007 မှာ 7: 09 pm တွင်
WoW!!!.. တော်တော်ချောတာပဲ!... အခုချက်ချင်းစကားပြောဖို့ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတော့ ခဏထိုင်စောင့်လိုက်မယ်...
မတ်လ 17, 2007 မှာ 8: 47 AM
ဟေး….ဟော့ လင့်ခ် စုတ်။ ကော်ပီကူးထည့်ဖို့ ပျင်းတယ်!!!
မတ်လ 17, 2007 မှာ 9: 34 AM